मरेकाले जल्ने अधिकार गुमाएको हेर्न सकिनँ :: रेखा थापा – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ आश्विन २०७७, सोमबार ०२:०९ English
मरेकाले जल्ने अधिकार गुमाएको हेर्न सकिनँ :: रेखा थापा
फरक काम र शैलीका कारण बेलाबेला चर्चामा आउने अभिनेत्री रेखा थापाले यसपटक भूकम्पपीडितमाझ पनि बेग्लै उपस्थिति जनाइन् । पशुपति आर्यघाटमा आफन्तको दाहसंस्कार गर्न नसकेकालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै उनले सहयोगको बेग्लै पाटो उजागर गरिन् । एक पोका चाउचाउ दिएर फोटो खिचाई फेसबुकमा छाउन खोज्ने कतिपय सेलिब्रेटीलाई पाठ पढाउँदै उनले भनिन्, ‘अरूको समवेदनामाथि खेलबाड गर्नुहुँँदैन, पाप लाग्छ !’ रेखासँग महाभूकम्पमाथि केन्द्रित भई राजन घिमिरेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
० भुइँचालो आउँदा तपाईं कहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो ?
– घरमै फोनमा कुरा गर्दै थिएँ । यस्तो भुइँचालो आउला भन्ने कुनै कल्पना कसैले गरेकै थिएन र मैले पनि कल्पना गर्ने कुरा भएन । सुरुमा त हावाहुरी आएजस्तो लाग्यो, केही बेरपछि मात्र भुइँचालो आएको थाहा पाएँ ।
० जीवनमा यस्तो भुइँचालो भोग्नुपर्लाजस्तो लागेको थियो ।
– कल्पनै गरेकी थिइनँ । कसैले नसोचेको र सबै नेपालीले एकैसाथ भोगेको पीडा, डर, त्रास हो यो ।
० यसपटकको भुइँचालोबाट के शिक्षा पाउनुभयो ?
– पीडा, दुःख र वेदना त छँदै छ, त्यसबाहेक कहिल्यै बिर्सन या भुल्न नहुने शिक्षा पनि दिएको छ यो भूकम्पले । अस्तव्यस्त बस्ती, घरहरू अनि असुरक्षित जीवन ठूलो समस्या हो भन्ने सन्देश दिएको छ । तीनतलाको नक्सापास गरेर ६ तले घर बनाएर गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई पनि शिक्षा दिएको छ । सरकारी इन्जिनियरहरू जो गैरकानुनी रूपमा घर बनाउन स्वीकृति दिन्छन्, तिनीहरूले पनि शिक्षा पाएका छन् । गाँसभन्दा पनि बास सुरक्षित हुनुपर्छ र बास भएमा गाँस जुटाउन सकिन्छ । त्यसैले बास सुरक्षित बनाउनतिर लाग्नुस् भन्ने शिक्षा पाइएको छ राम्रोसँग ।
० कतिपय कलाकर्मी त चाउचाउ र कुचो लिएर फोटो खिचाई मिडियामा छाउँदा तपाईंचाहिँ सामाजिक सञ्जालमा देखिनुभएन नि ?
– अरू देखिए होलान्, तर म देखिइनँ । किनकि, म आत्मीयता र साथ–सहयोगका कुरालाई प्रचारप्रसारको माध्यम बनाउन चाहन्न । परसेवा गर्न कुनै संस्था खडा गरेर हौवा फैलाउनुभन्दा व्यावहारिक तवरमा सहयोग उपलब्ध गराउन उत्रिहाल्नुपर्छ । यहाँ त कतिपय प्रचारका भोकाहरू संस्था र समूह बनाउनतिर लागे । यस्तो विपत्तिमा त जसले जे सक्छ त्यो सहयोग गर्ने हो । जे होस्, अरूहरू सामाजिक सञ्जालतिर लागे, मचाहिँ लागेँ आर्यघाटतिर ।
० आर्यघाटतिर लाग्ने सोचचाहिँ कसरी आयो नि ?
– म शनिबारदेखि नै निरन्तर आर्यघाटमै छु । भूकम्प आएपछि मन र दिमाग शान्त पार्न पशुपतिको मन्दिर जाने क्रममा आर्यघाटमा मेरो नजर प-यो अनि त्यता लागेँ । जीवित शरीर त जसरी पनि बाँच्छ होला, तर मर्ने मान्छेले जल्ने अधिकार गुमाउन लाग्दा मन रोएर आयो । सुरुको तुलनामा अहिले यहाँ दाहसंस्कार गर्न आउनेको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । त्यहाँ बाँचेकाहरूको पीडा त एकातिर छँदै थियो अर्कोतर्फ मृत शरीरलाई अँगालो हालेर रुने परिवारको सङ्ख्या पनि कम थिएन । उनीहरू भन्दै थिए लास जलाउन दाउरा किन्ने पैसा नै भएन । यस्तो अवस्था देख्दा मन नै थाम्न सकिनँ र आफैँ दाउरा किनेर उपलब्ध गराउन थालेँ । मलाई लाग्यो कि जस–जसको दाहसंस्कार गर्न मैले दाउरा किनेँ ती व्यक्ति पहिलो जुनीमा मेरा कोही थिए । अब म किरिया बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई भेट्न जाँदै छु ।
० सिङ्गो चलचित्र समूहसँग मिलेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किन एक्लै गर्नुभयो ? यसो गर्दा तपार्इंलाई घमण्डी पनि भने नि कैयनले ?
– भन्नेको मुख थुन्न सकिन्न । मलाई पीडा सहने, व्यथा बुझ्ने र दुःखमा परेकाहरूले आशीर्वाद दिनुभएको छ । दुई–चारजनाले घमण्डी भन्दैमा केही हुँदैन । यतिबेला समूह बनाएर कामभन्दा प्रचारको हौवा पिटाउने नभई अगाडि आएको विपत्तिको सामना वा सहयोग गर्नु अपरिहार्य छ र यही सोचका साथ म आफूखुसी उत्रिएकी हुँ । मलाई लाग्छ– मैले आफ्नो बुद्धि–विवेकले क्षमताअनुरूप सहयोग गरेँ । म सहयोग गर्ने संस्था वा समूह बनाउँदिनँ पनि । अगाडि जे छ र जसरी गर्न सकिन्छ त्यसरी सहयोग गर्छु ।
० प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो क्यारे, कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो ?
– उहाँ खुसी हुनुभयो । सरकारभन्दा अगाडि बढेर तपाईंले आफूले भ्याएसम्म सहयोग गर्नुभयो भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । हामीले नसोचेको काम गर्नुभयो भन्दै स्यावासी दिनुभयो ।
० राहत र उद्धारको मामलामा सरकार कमजोर देखियो पनि भन्छन् नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– भूकम्पको बेला सरकार कमजोर देखियो भनेर मैले प्रधानमन्त्रीसँग भनेँ । बरु जनता जागरुक भए, तर सरकार अल्मलियो भनी मैले भन्दा उहाँले यो स्वीकार गर्नुभयो । कलाकारहरूले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार सामाजिक कार्य गरेकोमा प्रशंसा पनि गर्नुभयो । यस्तो बेलामा फलानोले यति ग-यो, उति ग-यो भन्दा पनि मन, आत्मीयता र साथ ठूलो हो भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।
० अब के छ नि तपाईंको योजना ?
– अहिले चलचित्रसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने या फिल्म खेल्ने मुड छैन । अब काजकिरिया गरेर बस्नुभएका पीडित नेपालीमाझ पुग्ने योजना छ । यो भूकम्पले नेपालीलाई एक बनाएको छ । मानिसको जीवन खासै केही होइन रहेछ । बाँचुञ्जेल साथ, सहयोग र आपसी सद्भाव हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यो भूकम्पले दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो त राष्ट्रियता हो भने भावना प्रत्येक नेपालीको मन र दिमागमा छिरेको छ । देश टुक्र्याउने र जातीयताको रूपमा भिडाउन खोज्ने नेताहरूले नराम्ररी शिक्षा पाएका छन् । दुःख पर्दा आखिर जातीयता र सङ्घीयताको मतलब होइन प्रत्येक नेपाली एउटै हुँदारहेछन् भन्ने सकारात्मक शिक्षा पनि मिलेको छ । एउटा नेपालको पीडा र व्यथा अर्को नेपालीले बुझ्नुपर्छ, त्यसमा जातभातको कुरा हुँदैन रहेछ भन्ने शिक्षा मिलेको छ । एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको आँसु पुछ्ने र नेपाली–नेपाली जुटेका छन् । जे भयो अब भइसक्यो, त्यसकारण विगतलाई सम्झेर मन र दिमाग गलाउनुभन्दा अब नयाँ बाटो, बिहानी र उद्देश्यका लागि एक भएर अगाडि बढ्नुपर्र्ने अवस्था आएको छ । सबै एक भएर हात मिलाउँदै अगाडि बढौँ ।
२५ बैशाख २०७२, शुक्रबार ०२:२५ मा प्रकाशित
कालो बादल सार्वजनिक	३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०९:२२